Ethiopia: Doorashooyinkii Guud Oo Dib U Dhacay Mudo Aan Cayinayn – Heemaal News Network
Banaanbax Looga soo Horjeedo Dilkii George Floyd Oo Safarada Mareykanka Ee Nairobi ka Dhacay
Komishanka Doorashooyinka Ethiopia ayaa dib u dhigay doorashadii guud ee dalkaasi ee loo balansanaa inay dhacdo bisha August ee sanadka 2020ka, saamaynta caabuqa coronavirus aawadeed.
Komishanka ayaa waxa uu sheegay in waqtiga doorashada la mudayn doono marka uu dalkaasi ka baxo halganka uu kula jiro caabuqa coronavirus-ka kadib.
Komishanka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in hawlahii u diyaargarowga doorasha ee qorshaysnaa uu caabuqani kala dhantaalay, waxna aanay ka qabsoomin, hawlahaas oo ay ka mid yihiin in waqtigii loogu talo galay la keeno agabkii doorashada iyo in shaqalahii doorashada la tabababro labadaba.
Sidoo kale qorshayaasha ayaa waxa ku jiray in codbixiyayaasha la diiwaangaliyo bisha April iyo in axsaabtu ay ololaha u dareerto bisha May, hawlahaas oo dhana waxay u muuqdaan kuwo aan qabsoomayn ayuu komishanku yidhi.
Doorashadan ayaa noqon lahayd tii ugu horaysay ee dimuquraadi ah ee dalkaasi ka dhacda taas oo uu ku baaqay Raysal Wasare Abiy Ahmed oo xukunka dalkaasi qabsaday sanadkii 2018, waxana ay qayb ka ahayd isbedel balaadhan oo nolosha
Itoobiyaanka taabtay oo uu qaaday Dr. Abiy.
Birtukan Mideska, oo ah haweenay hore u ahaan jirtay xaakin iyo xubin firfircoon oo mucaaridka ah ayaa loo doortay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Ethiopia bishii November ee sanadkii 2018.